Isbarbar dhig heshiisyada – Red Sea Energy
Qiimaha korantada waxaa keena wax soo saar iyo baahi.
Baahida sare = qiimaha korontada oo qaali ah.
Dalab hoose = qiimaha korontada oo jaban.
(Qiimaha suuqa ee hadda)
SPOT waxaa loogu talagalay adiga oo doonaya inaad ka hesho dhammaan qiimaha isbedelada suuqa.
Faa’iidada ayaa ah marka aysan aheyn xilli kulul ama qabow. Malaha waxaa yaraan doona baahida loo qabo koronto / koronto halkan. Dalab yar ayaa hoos u dhigaya qiimaha korontada. Sidaa darteed waxaad heleysaa awood jaban.
Faa’iido darrida waxay ku jiri kartaa xilliyada qabow sida xilliga jiilaalka. Xilliyadahan oo kale waxaa jiri doona baahi sare, sidaas darteedna qiimaha korontada oo qaali ah.
Khasaaraha kale waxaa ka mid ah xilliga qalalan, dabeylo hooseeya iyo wax soo saar hooseeya. Halkan, qiimaha korontada sidoo kale waa qaali.
inbadan aqri oo dalbo
Qiimaha go’an waa la saadaalin karaa. Taasi waa, waxaad helaysaa qiimo isku mid ah iyadoon loo eegin qiimaha korantada suuqa ee maanta.
Sidee qiime go’an loo dejiyey?
Annagu haddaanu nahay Tamarta Badda Cas waxaan dejinay sicir ku saleysan sicirka taariikhiga ah ee taariikhiga ah. Waxaan u qaadnay celceliska qiimaha laga bilaabo 2016-2020. Taasi waa sida aan u xisaabnay qiimaha go’an.
Faa’iidada: xilliyada qabow iyo kuwa qalalan markay sicirka suuqku sarreeyo, qiimaha go’an ayaa hooseeya.
Faa’iido darrada: marka sicirka suuqa dhibcuhu hoos u dhaco, badiyaa xilliga xagaaga, sicirka go’an ayaa is beddeli doonin. Si kale haddii loo dhigo: mahelaysid isbadalada sicirka suuqa.
Adeegga macaamiisha oo luuqado badan ku hadla
Anaga aaminsanahay in qof walba la maqlo lana fahmo. Taasina waa mid ka mid ah yoolalkayada ugu waaweyn. Tamarta Badda Cas waxay leedahay adeeg macaamiil oo 6 maalmood ah oo u dhexeeya 08:00 iyo 20:00, Isniinta-Sabtida. Faallo celintaadu waxay naga caawineysaa hagaajinta adeegga macaamiisha. Waxaan u qaadaneynaa weydiimahaaga si dhab ah!
Heshiisyada awoodda xasiloon
Qiimaheena korontadu waa kuwo xasilloon oo ku habboon qof walba. Adiga ku bixinnaa qiimaha aan ku ballanqaadeyno heshiis.
Tamarta Badda Cas waxay dan weyn ugu jirtaa la dagaallanka wasakheynta. Waxaan qorsheyneynaa inaan taageerno ururada maxaliga ah iyo kuwa wadaniga ah ee u dagaalama deegaanka iyo dabeecadda. Qeyb weyn oo ka mid ah dadaalkeena, waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u bixin lahayn 100% tamar la cusboonaysiin karo!
Sbarbar dhig heshiisyadai
Lambarka shirkadda: 919 665 289